Umaka: IBM | Martech Zone
I-Clicktale: Ukulandelwa Komcimbi Wezibalo endaweni engenayo ikhodi
NgeSonto, Novemba 19, 2017 NgeSonto, Novemba 19, 2017 Douglas Karr
U-ClickTale ube yiphayona embonini ye-analytics, enikezela ngemininingwane yokuziphatha nokubonwa okucacile okusiza ochwepheshe be-ecommerce kanye ne-analytics ukukhomba nokwenza ngcono ezindabeni ezinamasayithi abo. Isihleli esisha se-ClickTale sinikeza okunye ukuziphendukela kwemvelo, ngezindlela ezingenakhodi zokuhlanganisa imicimbi kusayithi lakho lonke. Mane ukhombe into yomcimbi wakho bese uchaza umcimbi… I-ClickTale yenza okunye. Nge-Visual Editor, iClicktale ingenye yezinkampani zokuqala ukunikeza isixazululo ngaphakathi
Njalo Vala: Izibalo Ezingu-10 Zokushintsha Ukuthengisa Kokuthengisa
ISonto, May 29, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ithimba lakwaMicrosoft lihlanganise iphepha elimhlophe elimhlophe ngezinselele nempumelelo yezinhlangano ezithengisa, ukukhiqiza kwazo, kanye nekhono lokuzivumelanisa nokwamukela ubuchwepheshe. Sivame ukuhlangana nezinkampani eziveza yonke imiphumela yokuthengisa ekhangayo kusuka kuzwi ngomlomo nangokubiza okubandayo. Angikungabazi nakancane ukuthi lawa macebo ayasebenza - impela ayasebenza. Amasu wokuthengisa ezinkampanini eziningi awashintshile esikhathini esingaphezu kweminyaka eyishumi. Kuyishwa lelo, ngoba yini
Isoftware Yokumaketha: Abadlali Abalulekile Nokutholwa
ULwesithathu, May 25, 2016 ULwesithathu, May 25, 2016 Douglas Karr
Ngaphezulu kwamabhizinisi angama-142,000 asebenzisa isoftware yokumaketha. Izizathu ezi-3 eziphezulu ukukhulisa imikhondo efanelekile, ukukhulisa umkhiqizo wokuthengisa, nokwehliswa kokukhangisa okuphezulu. Imboni yezokumaketha ikhule isuka ezigidini ezingama- $ 225 iye ngaphezulu kwe- $ 1.65 billion kule minyaka emihlanu edlule Le infographic elandelayo evela kwaMarketation Automation Insider ichaza ukuvela kwesoftware yokuthengisa evela ku-Unica eminyakeni eyishumi eyedlule ngokusebenzisa ukuthengwa okungabiza u- $ 5 billion okusilethele
Yini ama-Analytics? Uhlu Lwezobuchwepheshe Zokumaketha
NgoMsombuluko, Julayi 7, 2014 NgeSonto, Okthoba 19, 2014 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi kufanele sibuyele kokuyisisekelo bese sicabanga ngempela ngalobu buchwepheshe nokuthi bazosisiza kanjani. Izibalo ezisezingeni eliphansi kunazo zonke ulwazi oluvela ekuhlaziyweni okuhlelekile kwedatha. Sixoxe ngamagama wokuhlaziya iminyaka manje kepha kwesinye isikhathi kuhle ukubuyela kuzisekelo. Incazelo ye-Marketing Analytics Marketing analytics iqukethe izinqubo nobuchwepheshe obenza abathengisi bakwazi ukuhlola impumelelo yezinhlelo zabo zokumaketha